Xoolo ka yimid Buuhoodle oo lagu wareejiyey dadkii roobabku waxyeeleeyeen (Sawiro + Dhegaysi) – Radio Daljir
Janaayo 10, 2014 6:41 b 0
Garoowe, ?Jan 10, 2014, Magaalada Garoowe ee caasimada Dawlada Puntland ayaa maanta lasoo gaarsiiyey Xoolo gaaraya 500 oo neef oo Ari ah kuwaasoo laga soo aruuriyey gobolka Cayn looguna tala galay dadkii ku waxyeeloobey roobabkii dhowaan ka da ay Puntland.
Odayaal & waxgarad gudi ah oo kasoo aruuriyey xoolaha deegaanka Buuhoodle ayaa maanta ku wareejiyey Culimada & Isimada u xilsaaran gurmadka dadkii waxyeeladu soo gaadhey ee roobabku saameeyeen.
Munaasibada wareejinta xoolaha waxaa ka qaybgalay Madxweyne kuxigenka Puntland Cabdixakiin X Cabdilaahi Cumar Camey , Islaan Ciise Islaan Maxamed, Culima Awdiin, cuqaaal & waxgarad kale.
Ugu horayn waxaa munaasibada ka hadlay Maxamuud X Cumar Camey oo kamid ah odayaasha Buuhoodle isagoo deeqdan ku wareejiyey gudiga.
Intaas kadib gudiga ayaa hadalka qaatay iyagoo uga mahadceliyey dadka reer Buuhoodle sida ay dadkooda ugu soo gurmadeen.
Deeqaha xoolaha ah ee lagu warejinayo gudiga gurmadka dadkii waxyeeladu kasoo gaadhey roobabku ayaa soo badanayey mudooyinkii danbe, dhowaan ayay ahayd markii xoolo Ari ah lagu wareejiyey gudiga waxaana gudigu markale qaybin doonaan xoolahaasi.